Umatshini wokuDibanisa izixhobo zeDynamic | Kwichina Abavelisi bezixhobo eziXineneyo zoMbane, abaXhasi
I-Crane yokuQiniseka kokuQinisekiswa kweDynamic
Yamkela i-injini ye-dizili eyi-194 kW ye-Cummins enamandla amakhulu kunye ne-Emission Standard Stage III. Okwangoku, ixhotywe nge-140 kW yempompo enkulu eguqukayo enamandla ngokuhambisa okuphezulu. Kwakhona isebenzisa amandla eliphezulu sokutsala into ngentambo kunye nokumelana olomeleleyo ukudinwa, nto leyo ngempumelelo ukwandisa ixesha lokusebenza nokuphucula ukusebenza ukusebenza.
I-YTQH350B yeDreyini yokuxinana kwe-crane
I-YTQH350B Dynamic yokuxinana crrawler crane luphuhliso olukhethekileyo lwezixhobo zokuxinana. Ngokwemfuno yentengiso esekwe kumava eminyaka eliqela yokuvelisa ukuphakamisa izinto zobunjineli, ukuqinisa kunye nezixhobo ezinamandla zokuxinana.
I-YTQH450B yeDreyini yokuxinana kwe-crane
I-YTQH450B eguqukayo yokurhabaxa i-crane yinto ekhethekileyo yokugaya kunye ne-truss kunye nokuxinana okupheleleyo kwe-hydraulic kunye nokuphakamisa izixhobo ngokuzimeleyo kuphuculwe ngokweemfuno zentengiso esekwe kwiminyaka emininzi yokuvelisa ubunjineli bokuphakamisa izinto, ukubumbana kunye nezixhobo ezinamandla zokuxinana.
Imodeli inentsebenzo ephezulu, ukuthembeka okuphezulu kunye nembonakalo entle, ihlangabezana ngokupheleleyo nemeko yokuxinana okuguqukayo.
Isetyenziswa ngokubanzi kulwakhiwo lwamashishini kunye nolwaseburhulumenteni, iindawo zokugcina, indlela, iipeyitha kunye nokunye ukuqinisa isiseko, umsebenzi wokwakha onamandla wokuxinana.
YTQH700B Dynamic yokuxinana kokukhwela crane
Umsebenzi oqinileyo kwaye kulula ukusebenza. I-YTQH700B yokunyanzelwa kokurhabaxa kwe-crane kukudibanisa ngokupheleleyo, ukudityaniswa kwamacandelo ama-truss-boom kunye nokudityaniswa ngamandla koomatshini bokunyusa oomatshini abaphuculweyo ukuhlangabezana neemfuno zentengiso kunye nokudityaniswa kunye namava eminyaka kwimveliso yobunjineli bokuphakamisa kunye nezixhobo zokuxinana. Le modeli inempawu zomsebenzi ophezulu, ukuthembeka okuphezulu, kunye nembonakalo entle.
YTQH1000B Dynamic yokuxinana kokukhasa
YTQH1000B Dynamic ukuqina crrawler crane sisixhobo ezizodwa onamandla ukugangatheka. Ngokwemfuno yentengiso esekwe kumava eminyaka eliqela yokuvelisa ukuphakamisa izinto zobunjineli, ukuqinisa kunye nezixhobo ezinamandla zokuxinana.